I-Google's Pixel 3 kunye nePixel 3 XL ziyavela kwakhona kumnatha [imifanekiso] | Iindaba zeGajethi
Sisondele kakhulu ekuboneni ukuba yeyiphi imodeli yesithathu yeGoogle Pixel kunye nePixel XL, izixhobo ezithi ukuba yonke into ihamba ngaphezulu kokulindelweyo iya kwenziwa emva kwehlobo ngabafana abavela kwiNtaba yokujonga. Ngayiphi na imeko asinawo umhla othile ochaziweyo yinkampani uqobo kwaye kuya kufuneka silinde, into esiyaziyo uyilo lwayo kwaye Ngoku i-OnLeaks ivuze uyilo lweemodeli ezimbini Ngokucacileyo ngokupheleleyo.
Idatha yobuchwephesha yeGoogle Pixel 3 kunye nePixel 3 XL icoca uthungelwano kangangeenyanga kwaye kule meko sinemifanekiso emininzi esenza sibone uyilo ngokucacileyo eqinisekisa "inotshi" kwimodeli enkulu.
Kungcono ukubona yonke imifanekiso ecociweyo ngoko masihambe negalari yezithombe i-OnLeaks isishiye kwi-twitter:
Siyayibona ngokucacileyo uyilo lwayo kwaye iyaqhubeka ngokweemodeli zangaphambili, isivamvo somnwe esibekwe ngasemva kuzo zombini iimodeli, uyilo luyafana kwaye siyabona ukuba ikhamera engemva yongeza kuphela ilensi enye kuzo zombini iimodeli . Ukuvuza kwangaphambili kutyhila ubungakanani bokwenyani kwezi zimbini zePixel kaGoogle kwaye ngoku ngeefoto sinokufumana umbono ongcono wento esiza kuyibona, imodeli kaGoogle Pixel 3 inayo 5,4 intshi 18: 9 screen kunye nemilinganiselo ye-145,6 x 68,2 x 7,9mm kwaye eyona modeli inkulu iya kuba ne Isikrini esingu-6,3-intshi esine-19: 9 ratio, IPixel 3 XL iya kuba yi-158 x 76,6 x 7,9 ngenotshi kunye nayo yonke into.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-Pixel 3 kaGoogle kunye nePixel 3 XL ivela kwakhona kumnatha [kwimifanekiso]